Maalinta: Sebtember 5, 2017
Laba Shirkadood oo Caalami ah oo Mashruuca Mashruuca Kartepe Ropeway
Taariikhda qandaraaska ee Mashruuca Xariga ee Kartepe ayaa la shaaciyey. Duqa magaalada Hüseyin Üzülmez ayaa yidhi, shaida labo shirkadood oo caan ah adduunka waxay heleen fayl mashruuca jidadka. 20 ayaa jilcin doonta bisha Sebtembar ”Tender 20 [More ...]
Xaaladda Xaadirka ah ee Mashruuca Nidaamka Tareenka ee Trabzon
Duqa Magaalada Trabzon Metropolitan Orhan Fevzi Gumrukcuoglu, Trabzon wuxuu noqday mushkilad weyn dhibaatooyinki ugu dambeeyay ee taraafikada ee la xiriira Haber61'e ayaa bayaan laga soo saaray. Madaxweynaha, isagoo caddeeyay in EDS ay sugeyso oggolaanshaha Agaasinka Guud ee Amniga [More ...]
CHP Soo Celinta :: Ya Kanal, Ya Istanbul P
War-Saxaafadeed ka soo baxay CHP Istanbul kuxigeenka Gülay Yedekci oo ku saabsan ku dhawaaqida heshiiska mashruuca daraasadda ee go’aaminta jidadka iyo qaybaha Mashruuca Channel Istanbul waa sida soo socota: “Dabeecada Dabiiciga ah”, oo loogu magac daray “Mashruuca Crazy ında ee 2011. [More ...]
NEOPLAN Tourliner farxad cusub ee Urfa Astor
Urfa Astor, oo ku soo kordhay xawaare kordheysa tan iyo markii la bilaabay 2009, ayaa ku daray 2 cusub oo dalxiis ah filimkiisa duulimaadka Shirkadda leh 5 Starliner iyo 2 Dalxiis ee diyaaraddaheeda, sidaas darteed [More ...]
Ku faraxsanaanta Metrobust!
Metrobuses, oo lagama maarmaan u ah gaadiidka dadweynaha, sidoo kale martigaliyayaashu way jecel yihiin aragtida koowaad. Waxaan gaarnay sheekada dadka jecel da 'yarta ah ee sugaya saacado isla istaag isla markaana waxaan ku gaadhay dhamaadka farxad leh gabadha ay jeceshahay ... Mete metrobus oo ka socota Habertürk [More ...]
Dadka sida Kobis
Nidaamka Gaadiidka Kocaeli Bike (Kobis), oo ay bixiso Kocaeli Metropolitan Municipal 2014 oo loogu talagalay nolol magaalo caafimaad qabta oo ku habboon, ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordheysa. Iyadoo Kobis [More ...]
Baaxadda Festifaalka ee Balcova Cable Car
Xarumaha Gawaarida Magaalada ee Izmir Caasimadaha Magaalada, oo leh rajo wanaagsan iyo biyo xireenno labadaba, waxay noqdeen meesha laga soo booqdo booqdayaasha xilligii Ciidul Adxaa. Xaruntu waxay dejisay 4 kun oo 16 qof ah maalintii 784. Magaalada weyn ee Izmir [More ...]
IZBAN Selcuk ayaa markaa gaari doonta Bergama
Izmir Aliaga-Tepeköy izban dhexeeya adeegaya shuqullada dhismaha line tareenka dheer oo ku saabsan 26 km u dhexeeya Tepeköy-Selcuk Selcuk gaadiidka ilaa dhamaadka ayaa la gaarey. Agaasimaha Guud ee TCDD, Mudane IZBAN BERGAMA AK İsa ApaydınEe İZBAN [More ...]
2 oo wakiil ka ah hal-abuurnimo wadaniga Turkiga. XARUNTA MMG R & D INNOVATION SUMMIT iyo EXRIBITION, 6-7 waxaa lagu qaban doonaa Istanbul Congress Lütfi Kırdar Center inta udhaxeysa bisha Sebtember 2017. baahida Turkey ee koritaanka dhakhso [More ...]
Sannadkan macaashka billaha ah ee "6" wuxuu qiimihiisu ahaa $ 4 bilyan, halka mugga saddex meelood meel saddexaad uu ahaa $ 2.5 bilyan. Ilaa hadda, maalgelinta mashruuca tamarta ku shaqeeya, waa matoorka kobaca sanadkan [More ...]
Gebze Dogu Mucelles Waddada Waddada Xidhiidhka
Turk Telekom waxay ku taallaa qalabka teknoolajiyada adduunka
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa cadeeyay in TürkTelekom ay qaadatay talaabo caalami ah oo ay kaga qeyb qaadaneyso bartilmaameedka wax soo saarka teknolojiyadda gudaha iyo tan dowladda iyo in Mareykanka uu saldhig u yahay. [More ...]
Kulan lagu ciyaari doonaa Eskisehir, Turkey-Croatia Gaadiidka iyo Facility Parking
kooxda kubadda cagta qaranka Turkey ee taariikhda 5 September 2017 in Eskişehir degmada Metropolitan kulanka Croatia ayaa la ciyaari doonta baska oo bilaash ah si ay ciyaarta u socday oo u oggolaan doonaa inay taageerayaasha ku meel baabuurta la dhigto. 5 garoonka New Eskisehir Ataturk [More ...]
Goorma ayaa la furayaa metro Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy?
2 ayaa ku soo dhowaatay dhamaadka Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy tareenka dhulka hoostiisa oo aan loo furin sababo dhowr ah sanado badan. Sida ku cad macluumaadka aan ka helnay IMM, shaqooyinka waa la soo gabagabeyn doonaa bisha Sebtember isla markaana sida ugu dhaqsaha badan ayaa loo dhaqan gelin doonaa. metro horeysay Turkey ee driverless [More ...]